Ukulungiswa Kwamakhompyutha, i-Hardware neSoftware - Ukuvuselelwa Kokuthuthuka Kwamakhompyutha
Amakhompiyutha adinga ukuvuselelwa njalo, ukugcinwa, ukuthuthukiswa kanye nangezinye izikhathi ukulungiswa.
Ukugcinwa njalo kwamakhompyutha kusho ukuqinisekisa ukuthi ikhompyutha isebenza kahle, isusa amaphutha, iyasheshisa, igcina ikhompyutha yakho isesikhathini futhi ivikeleke ngokuphelele. Ukugcina ukukhuphuka kwezobuchwepheshe engqondweni, ikhompyutha idinga ukuvuselelwa nokuvuselelwa okuvamile. Lokhu kusho, kanye ngesikhashana kuzodingeka uthuthukise isoftware ne-hardware yekhompyutha yakho.
Sikunikeza uhlu lochwepheshe abangakusiza ngokulungiswa kwamakhompyutha nokugcinwa kwawo.
Ukuvuselelwa kwesoftware kufaka ukubuyekeza i-antivirus, amawindi, ama-media player, ama-driver, njll. ithuthukiswe nge-software ne-hardware enhle kakhulu iqinisekisa ukusebenza kahle nokuvikeleka.
Yize abantu bebheka ukususa izinkinga noma ukulungisa amaphutha bebodwa, kodwa kunconywa ukuqasha umhlinzeki wesevisi yamakhompiyutha onguchwepheshe ukuqinisekisa ukuthi konke kusebenza kahle futhi unezinsizakalo ezihamba phambili.
Lungisa, Thuthukisa, Ukubuyekeza
Ikhompyutha iyisetshenziswa esisetshenziselwa ukwenza izinqubo ezahlukahlukene. Amakhompyutha atholakala ngosayizi abahlukahlukene futhi asetshenziselwa ukwenza imisebenzi ehlukene esiza ukonga isikhathi nemali. Kunesoftware eningi esiza ukucubungula imisebenzi ehlukene ngokushelelayo.
Isoftware ibizwa ngokuthi yizinhlelo zokusebenza, ezenza imisebenzi ngokuzenzekelayo futhi zenze izinqubo zibe lula kakhulu. Lokhu kwenza ukuphathwa kube lula kakhulu.
Thola Abanye Abahlinzeki Abasesha
Uhlu Lwesikhombisi sohlu kukuvumela ukuthi uthole uhlu lochwepheshe abakusizayo ngokulungiswa kwehardware yekhompyutha yakho kanye nesoftware. Bazokusiza ngamadrayivu nesoftware edingekayo eqinisekisa ukusebenza kahle kwekhompyutha yakho.
Uhlu lwethu lwezinsizakalo zokulungisa amakhompiyutha lubandakanya ochwepheshe basendaweni nabaku-inthanethi abangakusiza kuzo zonke izinkinga ezinkulu noma ezincane ngekhompyutha yakho. Abagcini ngokukunikeza ukubonisana kepha futhi bakunikeza ngezinsizakalo zokulungisa nezokuthuthukisa ngokuya ngezidingo zakho.
Unenketho yokuhlunga abahlinzeki besevisi ngesifunda futhi ungasebenzisa izinketho ukuqasha abahlinzeki bebhizinisi abalungisa kahle ikhompyutha endaweni yangakini.
Lapho kunenkinga ngehardware yekhompyutha kuzodala izinkinga ngomshayeli nesoftware yayo. Ukungeza i-hardware entsha, isoftware efana ne-hard drive enkudlwana, amakhadi wezithombe noma imemori khadi ukusheshisa amakhompiyutha lapho ukuthuthuka kwehardware ngesandla kudingeka kokunye ukuthuthukiswa kwesoftware.
Ukugcina ikhompyutha yakho ithuthukisiwe ngesoftware ne-hardware yakamuva kube yisidingo, ikakhulukazi lapho yonke into ithola izibuyekezo. Ukuthola i-Hardware ne-software entsha efana nekhadi lemidwebo, i-hard drive, amawindi njll. Kuvumela ukuphatha kahle imisebenzi nezinqubo ngokushelela.
Ukulungisa Isoftware Yekhompyutha
Ukuthuthuka Kwesoftware Yekhompyutha